साहित्य Archives - Page7of9- Namaste Times
बिहिबार, चैत्र ०७, २०७५ | Sunday, October 29, 2017
काठमाडौंसहित केही भागमा आज पनि वर्षा हुन सक्ने
काठमाडौं - काठमाडौंसहित देशको केही भागमा आज पनि मेघ गर्जनसहित वर्षा हुने सम्भावना छ । मौसम विभागले जनाए अनुसार, शनिबार बेलुका काठमाडौंमा २६।३ मिलिलिटर पानी परेको थियो भने केही ठाउँमा असिनासमेत परेको थियो ।तर आइतबार बिहान भने काठमाडौंमा घाम लागेको छ । मौसमविज्ञ समिर श्रेष्ठका अनुसार, आज पनि काठमाडौंलगायत केही क्षेत्रमा मेघ गर्जनसहित पानी पर्ने सम्भावना छ । हिमाली क्षेत्रमा हिजैदेखि हिउँ पर्ने क्...
“मर्न नसकेको पागल धुर्मुस-सुन्तली” -ओ पागल धुर्मुस ,ओ पागलनी सुन्तली
"मर्न नसकेको पागल धुर्मुस-सुन्तली" (कविता) ====================== ओ पागल धुर्मुस ओ पागलनी सुन्तली तिमीहरु त पागल भयौ-भयौ बेकारमा हामीलाई बेकरमा यो दुनियालाई किन पागल बनाउदैछौ? धुर्मुस-सुन्तली साँच्चै तिमीहरु पागल हौ पागल महाँ पागल हौ। मान्छे हँसाएर कमाएको अभिनय गरेर कमाएको त्यत्रो पैसाले पनि के तिमीहरुलाई खान-लाउन पुग्दैन? नत्र किन तिमीहरु घरबार विहिनलाई घर दिन्छौ उजाड माटोम...
रहेनन् पूर्वमन्त्री इन्द्र प्रसाद ढुंगेल
काठमाडौं - पूर्वमन्त्री इन्द्र प्रसाद ढुंगेलको निधन भएको छ । राजधानीको चावहिलस्थित ओम हस्पिटलमा गएराति उनको निधन भएको पारिवारीक स्रोतले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । विगत केही समयदेखि उनी क्यान्सरका कारण बेड रेस्टमा थिए । रामेछापका ढुंगेल तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको मनत्रीमण्डलमा विज्ञान प्रविधि राज्यमन्त्री रहेर काम गरेका थिए । ढुंगेल विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय थिए ।...
काठमाडौं - महाकाव्यकार उमानाथ शास्त्री सिन्धुलियको औं जन्म जयन्तिका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनका चेला भोजराज ढकाल ‘मरिणखोले’ द्वारा लिखित अंगुलीमाल महाकाब्यको लोकार्पण गरिएको छ प्रमुख अतिथी प्राध्यापक फाल्गुणी शर्मा तिमल्सिना, कवि अंजुल. कथाकार भाईदाजु र जर्बुट्टा कलाकार विश्वम्भर लामिछानेले उक्त महाकाब्य संयुक्त रुपमा विमोचन गरे । उमानाथ शास्त्रीको जन्मजयन्तीमा चेला मरिणखोलेले महाकाव...
हाम्रो घरका पाहुना फेरिनु र देशमा प्रधानमन्त्री फेरिनु एउटै कुरा
कृष्ण प्रसाद शर्मा देउवा भए है प्रधानमन्त्री — एउटाले भन्यो खै यसले के गर्ला र ? — अर्काले सोध्यो कुन्नि बोलैकै बुझिदैन — फेरि अर्काको गुनासो । देश बर्बाद बनाउने भयो — बिचरा अर्काे देशभक्तको गुनासो । आज भोलि धेरै जसो राजनीतिमा चासो राख्नेको मुखबाट सुनिने कुरा हुन् यिनी । स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्व भएको सहमति अनुसार नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा देशका चालिसौँ प्रधानमन्त्रीका रुप...
घरको गोरु – कथा
जङ्ग पहाडी तेह्रथुम, हाल काठमाडौ । काठमाडौ : दाई छाती छाम्दै आई पुगे । उनको खुशीको सीमै रहेन । काठमाडाँै देखि आएका पाहुनाको स्वागतमा थियो यो खुशी । जिपको यात्रा निकै असहज लागे पनि छिटै पुग्यौ । जिप स्टेशनमा रोकियो । दाईलाई भेटेपछि थकान मेटियो । हामी आउने थाहा पाएपछि दाई काम छोडेर गाडीको आवाज बरबोटेमा सुन्ने वित्तिकै बाटोमा बसी राख्नु भएको थियो । देखे तर पोहोर आउँदा जस्तो अनुहारमा चमक ...
‘कला-साहित्य मेरो जीवन !’-सरल बोली ! महान मनामिर ! –कृष्णकला वनेम
खराबभन्दा असल कुरा र मान्छेहरु बाट ज्यादा प्रभावित हुन्छु । यसै क्रममा मेरो मन-मस्तिष्कले सम्झिरहने ब्यक्ति-व्यक्तित्वहरूको काम-जीवनको बखान गर्न थाक्दिन र अनुशरण गर्न खोजिरहन्छु। यसै क्रममा यो नोट तयार भयो । ‘बिर्सिएका गीतहरू’ गीतसङ्ग्रह प्रकाशनपछि नेपाली गीत लेखनमा चर्चामा पुग्नु भएकी गीतकार कृष्णकला वनेम आफैँ पनि गायिका हुनुहुन्छ । ‘कला साहित्यमा नलागे सुन्दर पारिवारिक जीवन ब्यत...
हिमालयन भोइस: कुङ्गा ङिमा शेर्पा
हिमालयन भोइस: कुङ्गा ङिमा शेर्पा उच्च हिमाली क्षेत्र । कार्तिकदेखि सेताम्य हिउँले राज गर्छ । फागुन अन्तिमसम्म हिउँले आफ्नो आधिपथ्य जमाउँछ । सोलुखुम्बू जिल्लामा लगभग ३५०० मिटर उचाईमा रहेको गुदेल, वार्ड नम्बर -४ मा सानाम भन्ने एउटा सुन्दर गाउँ छ । जहाँ शेर्पाहरूको वस्ती छ । आलू, बन्दाकोपी र फुलकोपी उत्पादन हुने यो गाउँमा देशी-बिदेशी पर्यटकहरू धेरै आउने गर...
रेणु दाहाललाई काँध थाप्ने नारीवादीहरुलाई
कृष्ण प्रसाद शर्मा काठमाडौ : रेणु दाहाल स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनकी प्रमुख नारी पात्र भएकी छन् अहिले । केही अघि रञ्जु दर्शना मुख्य नायिकाको रुपमा देखिएकी थिइान् । उनको चर्चा अहिले सेलाइसकेकको छ । अबकी नायिका रेणु दाहाल नै छन् । उनलाई प्रचण्डपुत्री भनेर भनिरहँदा केही शसक्त नारीवादीहरुलाई एकसय दुई डिग्रीको ज्वरो आएजस्तो देखियो । रेणुलाई किन प्रचण्डपुत्री भनेर सम्बोधन गर्ने के उनको क...